माधव नेपालको टिप्पणी- पशुपतिनाथले पनि केपी ओलीको भलो गर्दैनन्, चेतना भया ! (भिडियो) – Nepal Press
माधव नेपालको टिप्पणी- पशुपतिनाथले पनि केपी ओलीको भलो गर्दैनन्, चेतना भया ! (भिडियो)
केपी ओली कसरी पहिलो अध्यक्ष ? उनी बालकोटका होलान्
२०७७ माघ २८ गते १६:१४
‘पशुपतिनाथले राम्रो, असल मान्छेको मात्रै भलो गर्छन्’ बु्धबार राजधानीमा आयोजित विरोध सभालाई सम्बोधन गर्दै नेपालले भने, ‘पशुपतिनाथले पापीलाई भलो गर्दैनन्। लोकतन्त्रको हत्या गर्ने, संविधानको हत्या गर्ने केपी ओलीको रक्षा गर्दैनन् । चेतना भया ।’
ओलीले पहिले मदन भण्डारीको नाम लिने गरेको भन्दै अहिले त्यसलाई बिर्सेर पशुपतिनाथको नाम जप्न थालेको आरोप पनि नेपालले लगाए। ‘जनताको अपार उपस्थिति केपी ओलीले बुझ्न सकेका छैनन्’ उनले भने, ‘केपी ओलीजी मदन भण्डारीको नाम बिर्सेर पशुपतिनाथको नाम जप्न थाल्नुभएको छ ।’
जिल्ला-जिल्लामा भइरहेको बलात्कारप्रति सरकारको असंवेदनशीलता देखेर आफूहरुलाई लाज लागेको भन्दै उनले भने, ‘आम जनताले भनिरहेका छन् केपी अ‍ोलीलाई धिक्कार छ । पशुपतिनाथले पनि त्यही भन्लान् केपी अ‍ोली धिक्कार छ ।’
उनले बहुमत आफूहरूको पक्षमा रहेको भन्दै निर्वाचन आयोगले अन्यथा गर्न नमिल्ने बताए। ‘केपी ओली बहुमतको शासन मान्न तयार छन् भने निर्वाचन आयोगले पठाएको पत्रमा ४४१ लाई भनेको आधारमा जाने हो’ नेपालको भनाइ छ, ‘मार्चपास गरौं, केपी ओलीको पक्षमा सय जना उभिन्छन् । हाम्रो पक्षमा तीन सय उभिन्छन् । बहुमत हाम्रो भएकाले निर्वाचन आयोगले अन्यथा गर्न मिल्दैन ।’
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले निर्वाचन आयोगलाई धम्क्याइरहेको समेत आरोप लगाए। ‘केपी ओलीले आयोगलाई धम्क्याइरहेका छन्’ उनको भनाइ छ, ‘केपी ओली कसरी पहिलो अध्यक्ष ? उनी बालकोटका होलान् । कुनै विधान, सर्कुलरमा पहिलो अध्यक्ष लेखिएको छैन । सर्कुलर, दस्तावेज, निर्णय, विधान हेरे हुन्छ, त्यसमा पनि शंका छ भने ४४१ बोलाएर टाउको गन्दा पनि हुन्छ ।’
प्रकाशित: २०७७ माघ २८ गते १६:१४